1TB Storage Version ဝယ်မှ RAM 6GB ပါမယ့် iPad Pro အသစ်
1 Nov 2018 . 5:03 PM
Apple ရဲ့ တတိယမြောက်မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ iPad Pro အသစ်တွေကို မိတ်ဆက်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခု Apple iPad Pro အသစ်တွေက လက်ရှိအချိန်မှာ အကောင်းဆုံးသော iPad Pro တွေဖြစ်လာသလို ပြီးခဲ့တဲ့ မျိုးဆက် iPad Pro တွေနဲ့ ယှဉ်ရင်လည်း သိသိသာသာအဆင့်မြှင့်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အခု iPad အသစ်တွေက ဘေးဘောင်တွေကို အလွန်သေးငယ်အောင် ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ Home Button ပါဝင်မှာမဟုတ်တော့ဘဲ Gesture Navigation အသစ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မဟုတ်သေးဘဲ Keyboard Folio အသစ်၊ Apple Pencil အသစ်တွေကိုပါ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် Apple iPad Pro အသစ်တွေမှာ ပြောင်းလဲမှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရှိနေပြီးတော့ အဲ့ဒါကတော့ iPad Pro အသစ်တွေမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ A12X Processor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ A12X Processor အသစ်ကြောင့် iPad Pro အသစ်တွေက ကွန်ပျူတာတစ်ခုနီးပါးကို စွမ်းဆောင်ရည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုးစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပေမယ့်လည်း Apple iPad Pro အသစ်တွေမှာ RAM ပါဝင်မှုက ကွာဟနေတာဖြစ်ပါတယ်။ 11″ နဲ့ 12.9″ iPad Pro အသစ်၂ ခုစလုံးမှာ Storage အနေနဲ့ 64GB က စတင်တယ်ဆိုပေမယ့် Storage 256GB နဲ့ 512GB မှာ RAM က 4GB ပဲပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Storage 1TB မှာတော့ RAM ကို 6GB အထိ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် တကယ့်အကောင်းဆုံးသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Storage 1TB Version ကို ဝယ်ယူဖို့ လိုအပ်မှာပါ။
ဒါပေမယ့် အခု Storage 1TB Version iPad Pro တွေက ဈေးအလွန်ကြီးနေပြီးတော့ 11″ Model ကို $1549 နဲ့ 12.9″ Model ကို $1749 အထိပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် Apple အနေနဲ့ အခုလိုမျိုး တမင် Storage အမြင့်ဆုံး Model ကိုပဲ RAM 6GB ထည့်သွင်းပေးခဲ့သလဲဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာပါ။
Ref : Phone Arena
Apple ရဲ့ တတိယမွောကျမြိုးဆကျဖွဈတဲ့ iPad Pro အသဈတှကေို မိတျဆကျလိုကျပွီပဲဖွဈပါတယျ။ အခု Apple iPad Pro အသဈတှကေ လကျရှိအခြိနျမှာ အကောငျးဆုံးသော iPad Pro တှဖွေဈလာသလို ပွီးခဲ့တဲ့ မြိုးဆကျ iPad Pro တှနေဲ့ ယှဉျရငျလညျး သိသိသာသာအဆငျ့မွှငျ့တငျထားတာဖွဈပါတယျ။
အခု iPad အသဈတှကေ ဘေးဘောငျတှကေို အလှနျသေးငယျအောငျ ပွုလုပျထားပွီးတော့ Home Button ပါဝငျမှာမဟုတျတော့ဘဲ Gesture Navigation အသဈကိုလညျး ထညျ့သှငျးထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါတငျမဟုတျသေးဘဲ Keyboard Folio အသဈ၊ Apple Pencil အသဈတှကေိုပါ မိတျဆကျပေးခဲ့တာပါ။
ဒါပမေယျ့ Apple iPad Pro အသဈတှမှော ပွောငျးလဲမှုကွီးကွီးမားမားတဈခုရှိနပွေီးတော့ အဲ့ဒါကတော့ iPad Pro အသဈတှမှော အသုံးပွုထားတဲ့ A12X Processor ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီ A12X Processor အသဈကွောငျ့ iPad Pro အသဈတှကေ ကှနျပြူတာတဈခုနီးပါးကို စှမျးဆောငျရညျရှိနတောဖွဈပါတယျ။
အခုလိုမြိုးစှမျးဆောငျရညျကောငျးမှနျပမေယျ့လညျး Apple iPad Pro အသဈတှမှော RAM ပါဝငျမှုက ကှာဟနတောဖွဈပါတယျ။ 11″ နဲ့ 12.9″ iPad Pro အသဈ၂ ခုစလုံးမှာ Storage အနနေဲ့ 64GB က စတငျတယျဆိုပမေယျ့ Storage 256GB နဲ့ 512GB မှာ RAM က 4GB ပဲပါဝငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Storage 1TB မှာတော့ RAM ကို 6GB အထိ ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ တကယျ့အကောငျးဆုံးသော စှမျးဆောငျရညျကို လိုခငျြတယျဆိုရငျတော့ Storage 1TB Version ကို ဝယျယူဖို့ လိုအပျမှာပါ။
ဒါပမေယျ့ အခု Storage 1TB Version iPad Pro တှကေ စြေးအလှနျကွီးနပွေီးတော့ 11″ Model ကို $1549 နဲ့ 12.9″ Model ကို $1749 အထိပေးရမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ Apple အနနေဲ့ အခုလိုမြိုး တမငျ Storage အမွငျ့ဆုံး Model ကိုပဲ RAM 6GB ထညျ့သှငျးပေးခဲ့သလဲဆိုတာကတော့ စဉျးစားစရာပါ။
စြေးကှကျထဲကို ဝငျရောကျလာတေ့ာမယျ့ PUBG ၈နာရီနီးပါး ဆကျတိုကျပဈနိုငျမယျ့ဖုနျး
by Zawyè .2days ago
DOTA2Update မှာ Cheater နဲ့ Smurf Account တှကေို Ban တော့မယျ
by 2B .3days ago
Huawei Nova 5T နဲ့ ပတျသတျပွီး သငျသိသငျ့တဲ့အခကျြ (၅) ခကျြ
by Zawyè .5days ago
မကွာခငျစြေးကှကျထဲဝငျရောကျလာာတော့မယျ့ Nokia 3.2 နဲ့ 2.2
by Zawyè . 1 week ago
PC ဂိမျးတှေ Streaming ကစားနိုငျမယျ့ PlayGalaxy Link ကို စမျးနတေဲ့ Samsung
by 2B . 1 week ago
Should Read Posts
မကွာခငျပွညျတှငျးစြေးကှကျထဲကို မိတျဆကျတော့မယျ့ OPPO A9 2020 နဲ့ A5 2020
All Rights Reserved ©2019 Akhayar Media